अमेरिकी भिसा त्यागेर अर्गानिक फार्ममा रमाउँदै संगम - Prabhav Khabar
अमेरिकी भिसा त्यागेर अर्गानिक फार्ममा रमाउँदै संगम
काठमाडौं – विश्वका अधिकांश मानिसहरूको सपनाको मुलुक अमेरिका । हरेक मानिसले जीवनमा एकपटक जान पाउँ भनेर कल्पना गर्ने देश अमेरिका । त्यही सपनाको देश अमेरिकाको भिसा त्यागेर नेपालमै केही गर्छु कसैले भन्छ भने अनौठो लाग्छ किनभने अमेरिका जान मरिहत्ते गर्ने हामी नेपालीले अमेरिकाको भिसा लागेको जो कोही किन अमेरिका नगएर यहाँ घोटिएका होलान् भनेर आश्चर्यमा पार्ने गर्छ । अमेरिका जान र भिसा लगाउन लडाइँ नै हुन्छ तर, भिसा भित्तामा थन्काएर ताप्लेजुङका युवा संगम शेर्पाले आफ्नै ठाउँमा पसिना बगाउने निर्णय गरे । अहिले हाइसन्चो छ उनलाई । अमेरिका उनका लागि यहीँ छ ।
काठमाडौंको धुँवा धुलो र लामो लकडाउनको कारण तपार्इंलाई तनाव भइरहेको हुन सक्छ । एक्कै छिन भए पनि मन बहलाउनका लागि तपाईँ शान्त ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ ? तर, के गर्ने ? काठमाडौंमा यस्तो ठाउँ विरलै फेला पर्ने गर्दछ । तर, पछिल्लो समय काठमाडौंको कपनस्थित आकाशेधाराभन्दा केहि माथि यसकै आडमा अर्गानिक फार्म हाउस सञ्चालनमा आएको छ ।
तपाईंको मनले शान्त र आरामको खोजी गरी रहेको छ भने धित् मार्न यस ठाउँले सहयोग गर्छ । काठमाडौंको डाँडोमा भएर पनि पारिलो घाम ताप्दै विशाल अर्गानिक फार्म हाउसमा अर्गानिक परिकार खानुको मज्जा बेग्लै हुन्छ । फार्म हाउस वरिपरि जंगल र बीचमा फार्म हाउस भएका कारण रुखमा चिरिबिरी गर्दै वल्लो रुख र पल्लो रुख वल्लो हाँगो र पल्लो हाँगो गर्दै उड्ने चरा र चिरिबिरी आवाजले सबैलाई मन्त्रमुग्ध त बनाउँछ नै, अर्गानिक फार्म हाउसमा बस्नुको आनन्दको अनुभूतिसमेत गराइरहेको हुन्छ ।
सडकनजिकै भएर पनि तपाईंले त्यस्तो कुनै कोलाहल महसुस गर्न पाउनु हुने छैन । तपाईँलाई आनन्दसहितको शान्ति महसुस हुनेछ । फार्म हाउसमा बसेर तातो कफी, चिया वा चिसो पिउने र खाजामा के खाने ? तपाईँको रोजाइअनुसार खानाका परिकार उपलब्ध हुनेछ । फराकिलो फार्म हाउसनजिकै गाडी र मोटरसाइकलको राम्रो पार्किङको प्रबन्ध छ । यहाँ तपाईं हरियालीमा रमाउन त सक्नु हुन्छ नै त्यसका अलाबा फार्म हाउसमा पालिएका गाई, भैँसी, बाख्रा र कुखुरा हेर्न पाउँदा तपाईंलाई आफ्नो गाउँको झल्को गराउँछ ।
फार्म हाउसमा लटरम्म फलेका अम्बा झारेर खान पाउँदाको मज्जा बेग्लै हुन्छ । त्यसैगरी पारिलो घाममा बसेर अर्गानिक फार्म हाउसमा फलेका भोगटे खान पाइन्छ । फार्म हाउसमा लगाएका काँक्रा, लौका, साग र डल्ले खोर्सानी खरिद गरेर ल्याउन सकिन्छ । त्यसका लागि फार्म हाउसले छुट्टै कोसेली घर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
लाभदायक लटरम्म फलेका अम्बाको बोट र दानामा तपाईँका आँखा जान्छ नै, बोटमा तलदेखि माथिसम्म नाच्ने चराको लुकामारीले थप तपाईँलाई रोमान्चक त बनाउँछ नै । त्यसैगरी फार्म हाउस वरिपरिका रुखले पनि यसको शोभा बढाएको छ । झटारो हानेर अम्बा झार्न पाउँदा त झनै आनन्दको महसुस गर्न सकिन्छ ।
धुलो धुँवाबाट मुक्ति पाउन र मनलाई एकछिन भए पनि शान्त ठाउँमा बहलाउन युवायुवतीहरू र परिवारका सदस्यहरू यहाँ पुग्ने गर्छन् । तपाईँले खानपिनका लागि अन्यत्रको भन्दा सस्तो मेनु यहाँ पाउनु हुनेछ भने खानाका नयाँ नयाँ परिकारको पनि स्वाद चाख्न पाउनु हुनेछ । लोकल कुखुरा, टर्की, माछा, सेकुवा र अन्य परिकारसँगै लोकल फापरको ढिँडो खानेको यहाँ भीड नै लाग्ने गरेको छ । यहाँ उब्जाउ गरिएका आलु, भट्मास र गेडागुडीको स्वाद त झन् बिछट्टकै हुन्छ । यहाँ बसेर हरियालीको अवलोकन गर्ने हो की भित्र बसेर भलाकुसारी गर्ने हो ? रोजाइ तपाईँको ।
फार्मका सञ्चालक संगम र बन्दी शेर्पा यहाँ आउने ग्राहकले खल्लो महसुस गर्न नपर्ने बताउँछन् । आफ्नो ब्यस्त समयका बाबजुद थकान महसुस गरेर आएका धेरै ग्राहकहरू यहाँबाट भरपुर सन्तुष्टि लिएर फर्किने गरेको बन्दी शेर्पाको भनाइ छ ।
पसिना आफ्नै देशमा बगाऔँ भन्ने नयाँ सोच छ, शेर्पा दम्पत्तीको । संगम शेर्पाले आफ्नो अमेरिकाको भिसा त्यागेर आफ्नै देशमा पौरख गर्ने सोच बनाएका हुन् । साँघुरो ठाउँबाट सुरु गरेको उनको अर्गानिक फार्म हाउस अहिले काठमाडौंकै ठूलो फार्म हाउस बनेको छ । एकै ठाउँमा धेरै अर्गानिक परिकार पाक्छ यहाँ । पाहुनालाई बस्नका लागि चारवटा छुट्टाछुट्टै नयाँ सुविधायुक्त घर छन् । सफा र ताजा खाना पाउँदा यहाँ पुग्ने जो कोही मक्ख परेर फर्कने गरेका छन् । काठमाडौंमा जाडो बढ्दै गर्दा पारिलो घाम ताप्दै चियाको चुस्की लगाउने या कफी पिउने कल्पना यहाँ पुगेपछि पूरा हुन्छ ।
शान्त वातावरण भएकाले यहाँ बस्न आउन रुचाउनेको संख्या पनि बढ्दै गएको सञ्चालक बन्दी शेर्पा बताउँछिन् । यस फार्म हाउसमा कुनै पनि संस्था वा विभिन्न कार्यक्रम गर्नका लागि उचित प्रबन्धसहितको हलको पनि व्यवस्था छ । घत्लाग्दो कुरा त यहाँ के अनौठो छ भने यहाँ देउराली घर, सोल्टिनी घर, छाप्रो, मचानलगायत स्थानीय नाम राखिएको छ । बाख्राको खोर, गाईगोठलगायत नामले यहाँको आकर्षण थपेको छ ।
Published On: Wednesday, November 11, 2020 Time : 6:04:21
आगामी मौद्रिक नीतिबारे व्यावसायीका सुझाव
नेप्सेमा करेक्सन ८ अंकको गिरावट, १४ अर्बमाथिको कारोबार